Wasiirka ciyaaraha dalka Talyaaniga oo weerar ku ah Cristiano Ronaldo – Gool FM
(Turin) 26 Oct 2020. Wasiirka ciyaaraha dalka Talyaaniga ee Vincenzo Spadafora ayaa caddeeyay inay billaabatay baaris ka dhan ah xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo, kaasoo lagu eedeynayo inuu jabiyay xeerka taxaddarka cudurka Korona Fayras.
Wasiir Spadafora ayaa ku eedeeyay kabtanka Portugal inuu usoo duulay dalka Talyaaniga isagoo la xanuunsanaya xanuunka Korona Fayras, taasoo la micno ah inuu jabiyay xeerka u yaalla dalkaas oo ah inuusan usoo safri karin qof la xaqiijiyay inuu ehel la yahay cudurka cuuryaamiyay dunida bilihii ugu dambeeyay.
Ronaldo ayaa laga helay Coronavirus isagoo gudanaya waajibaadka xulkiisa qaranka Portugal, waxaana markii cudurka laga helay uu usoo safray dalka Talyaaniga si uu karaantiil ugu galo hoygiisa magaalada Turin, waxaana uu seegay labadii kulan ee ugu dambeyay oo ay ciyaartay Bianconeri.
Si kastaba ha ahaatee, Spadafora ayaa qabsaday cinwaannada wargeysyada kaddib markii uu xiddigii hore ee Real Madrid ku eedeeyay inuu xushmeyn waayay xeerka taxaddarka, sidoo kalena uusan ka idin qaadan hay’adaha caafimaadka.
Balse CR7 ayaa eedeyntaas iska difaacay isagoo muuqaal toos ah kasoo galay bartiisa Instagram waxaana uu wasiirka ciyaaraha Talyaaniga ku tilmaamay beenaale.
“Waan xushmeeyay xeerka, mana aanan jabin, sidaan horay idiin kuugu sheegayba isagu waa beenaale” ayuu yiri Ronaldo.
Waxaana uu intaas raaciyay: “Waxaan kasoo laabtay Portugal maxaa yeelay aniga iyo kooxdeyda waxaan isla meel marinnay wax walba oo loo baahnaa, waxaan ku imid diyaar caafimaad (Air ambulance) oo gaar ah, cidna lama aanan fal galin, xitaa Turin.”
Kaddib jawaabta laacibka Juve, wasiirka ciyaaraha ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay in xiddiga uu yahay mid aanan xushmad aqoonin, sidaas darteedna uu hadda ku socdo baaritaanno ka dhan ah.